Ukwehlukana Kwezinhlobo Eziphilayo Okuphawulekayo
Izinhlobonhlobo zeRichtersveld neNamaqualand ziyamangalisa. Kodwa lesi yisifunda esomile esinemvula yaminyaka yonke engu-150mm, okwenza kube yihlane. Kushisa kakhulu, lapho izinga lokushisa ehlobo livame ukukhuphukela amashumi amahlanu. Ngakho-ke, indawo enjalo engafaneleki ingathola kanjani ifa elicebile lezitshalo ezinjalo?
Yebo, kunezimo eziningana zezulu ezenze icebo lokudala i-Edeni elingalindelekile. Isici sokuqala esibalulekile okufanele sicatshangelwe umsinga we-Benguela obandayo, ogeleza enyakatho kuya ogwini olusentshonalanga lezwekazi. I-Benguela ivela esifundeni se-Antarctic, lapho amanzi ashisayo e-Atlantic ehlangana ne-Southern Ocean eneqhwa.
Lo mhlangano ubangela ukuthi amanzi afudumele aphole futhi acwebe, okwenza 'ukukhuphuka' kwamanzi abandayo, anokondla avela olwandle oluseningizimu. Imimoya enamandla evela eNingizimu Atlantic yenza lokhu kusakazwa kwamanzi abandayo kuze kube seCape of Good Hope kanye nasogwini olusentshonalanga. Ekugcineni igxuma emaphethelweni ase-Angola, lapho ihlangana nemifudlana ehambisana nokushisa.
Umsinga we-Benguela unomthelela omkhulu emvelweni wesizwekazi esingaphansi. Amanzi acebile anokondla asekela izinhlanzi eziningi, nazo ezisekela imvu yamanzi, izinyoni zamanzi nezinye izilwane zasolwandle. Amanzi okubanda aphezulu, abanda ngokwehlile ngamazinga okushisa amahlanu kunamanzi olwandle kumalathithudi afanayo, futhi anciphisa inani lokushisa okungenzeka. Ngenxa yalokho, imvula esogwini olusentshonalanga iphansi futhi okwamanje kunomthelela ojwayelekile wokuthi 'ishisise' esifundeni.
Kodwa umsinga we-Benguela unezinhlangothi zawo ngoba unomthelela wokungaguquli esifundeni. Imimoya epholile ekhuphuka olwandle ilinganisa izinga lokushisa elisogwini, ngakho-ke ukushisa akushisi kakhulu ngesikhathi sehlobo futhi akubandi kakhulu ngesikhathi sobusika. Kodwa-ke, ngenxa yezintaba, umnyelele olwandle awungeni esifundweni njalo ukushisa ngaphakathi nasehlobo e-Richtersveld kungakhuphuka ngaphezu kwamazinga okushisa angamashumi amane.
Umsinga we-Benguela ngumthombo wenkungu, enomswakama eqhutshwa njalo kusukela ogwini. Lezi zinkungu ezinzima, ezibizwa ngokuthi i-malmokkies noma hurries yizakhamuzi zendawo, zidalwa lapho umoya omswakama uqhuma kusuka entshonalanga futhi upholiswe ngamanzi angaphezulu abandayo. Lokhu kugqugquzela umoya ofudumele uguquke ube inkungu ehamba phezu kwamathafa asogwini, imboza izitshalo ngomswakama. Njengoba kwenzeka ikakhulukazi ezinyangeni zasekwindla, lapho isivinini somoya siphelile, lezi zimo zikhona njalo kanye isici esibalulekile ekuzaleni kwesizwe.
Ukuthembeka kwama-malmokkies kuhlanganiswa nephethini elimangalisayo lokuvula imvula. Ngokungafani nezinye izifunda zasemgwaqeni, iNamaqualand ayihlupheki isikhathi eside sesomiso. Ngakho-ke, ngenkathi imvula iphansi, ihlale ihlala injalo futhi lokhu kuvumela izitshalo ukuba zenze imijikelezo yazo kahle. Izizathu zalo mjikelezo wemvula evamile aziqondakali kahle.
Isimo sokugcina esibalulekile sezulu esilondolozela indawo yaseNamaqualand yiMimoya yaseBerg ephuma ngaphakathi eNingizimu Afrika yonke ebusika. Lesi simo sibangelwa isisindo esiphezulu somoya omile owehla engkangaleni eziphakeme. Umoya ushesha wehla emathafeni asezintabeni.
Njengoba wehla ezigodini, umoya uqala ukuyaluza. Umphumela, umoya oshisayo,omile udabula emathafeni asogwini. E-Namaqualand naseRichtersveld, le mimoya idala amazinga okushisa asebusika afudumele avumela izitshalo nezilwane ukuba zikhule futhi zikhiqize.